यी देशहरूमा, समलिङ्गी प्रेरित व्यवस्था द्वारा punishable छन्
अन्तर्राष्ट्रिय लेसबियन र समलैंगिक संघ (IGLA) अनुसार, विश्वको 73 देशहरुमा समलैंगिकों, gays, बिसेकषिल र transgender (LGBT) मान्छे विरुद्ध आपराधिक व्यवस्था छ।
वास्तवमा पूर्ण IGLA डाटा यो समस्या प्रतिबिम्बित गर्दैन। उदाहरणका लागि, तिनीहरू लाखौं मानिसहरू LGBT मान्छे विरुद्ध कानून प्रभावित इन्डोनेशिया, सूची छैन। डाटा पनि विभिन्न कारणहरूले गर्दा तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता देशहरूको सूचीमा वर्तमान छैनन् किनभने, समलिङ्गी सम्बन्ध विरोध कि तीन सरकारको समावेश छैन।
आज हामी तपाईँलाई LGBT समुदाय को देशहरूमा डाकू गरिएका जसमा थाहा प्रस्ताव। साथै, हामीले तपाईंलाई 10 देशहरूमा जसको व्यवस्था समलिङ्गी सम्बन्ध, कम्तिमा कागज मा लागि मृत्यु दण्ड को लागि प्रदान बारेमा भन्नेछु।
आधिकारिक रिपोर्ट IGLA
एउटा सरकारी रिपोर्ट IGLA 2016 अनुसार, संसारका त्यहाँ कानुनको हालतमा समलिङ्गी सम्बन्ध संग संघर्ष गर्दै छन् 75 देशहरूमा छन्। तथापि, मे 2016 मा सेचिलिस र नाउरू यसको व्यवस्था, IGLA रिपोर्ट प्रकाशनको लागि तयार गरिएको छ बस पछि निर्मूल। त्यसपछि, अगस्ट 10, 2016, बेलिज सर्वोच्च अदालतले पनि व्यवस्था LGBT strany.Takim विरुद्ध 72 देशहरूमा बाँकी IGLA सूचीमा आफ्नो बाटो पल्टाइदिनुभयो।
तर चाड गरेको संसद को डिसेम्बर मा एक नयाँ दंड कोड, समलिङ्गी प्रेरित अवैध थिए जो अन्तर्गत स्वीकृत। IGLA द्वारा सूची अर्को देशमा थपियो।
साथै, रिपोर्ट IGLA चार राजनीतिक संस्थाहरू उल्लेख, तर तिनीहरू सामान्य सूचीमा समावेश गरिएको छैन। यो सबै माथि, इन्डोनेशिया, समलिङ्गीहरूले विरुद्ध कानून छ कि दुई ठूलो प्रान्त। बाँकी तीन राजनीतिक संगठन पनि LGBT मान्छे विरुद्ध कानून छ, तर तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय को देशहरूमा द्वारा मान्यता प्राप्त छैन। यो कुक टापुहरू जसको बासिन्दाहरू न्यूजील्याण्ड नागरिक हो, छ, तर आफूलाई अलग राज्य, प्यालेस्टाइन मा गाजा पट्टी, साथै इस्लामी राज्य सिरिया र इराक मा विचार गर्नुहोस्।
साथै, लिथुआनिया र रूस रूपमा IGLA सूचीमा उल्लेख गरिएका छन्। यी देशहरूमा पनि LGBT समुदाय विरुद्ध कानून छ हुनत छैन, तर समलिङ्गीहरूले को प्रचार यहाँ अवैध छ। लिबिया र नाइजेरिया प्रचार विरुद्ध समान व्यवस्था छ, तर तिनीहरूले सूचीमा छन् भनेर त्यहाँ पनि प्रतिबन्ध लगाइएको समलिङ्गी सम्बन्ध हो।
सेन्ट पल फाउंडेशन को सूची
फिर्ता 2012 मा, सेन्ट पल फाउंडेशन यसको आफ्नै सूची, कुल, समावेश 76 देशहरूमा जो, बनाएको छ। यो सूची दुनिया भर कार्यक्रम यी नियमहरू को उन्मूलनको उद्देश्य लागि प्रयोग भएको थियो।
यहाँ सूचीमा हालका परिवर्तनहरू छन्:
पश्चिमी प्रशान्त, साथै अटलांटिक महासागर मा साओ टोम र प्रिन्सिपे मा पलाउ को सानो राज्य, हालै समलिङ्गी सम्बन्ध त्यसैले 2014 मा सूचीबाट बहिष्कृत थिए decriminalized।
मोजाम्बिक, 2014 को दोस्रो आधा 24 लाख मानिसहरूको जनसंख्या संग अफ्रीका को दक्षिणपूर्वी तट मा स्थित, नयाँ आपराधिक कोड अपनाए र 2015 को सुरुमा सूचीबाट बहिष्कृत भएको थियो।
लेसोथो पनि सूचीबाट LGBT मान्छे विरुद्ध कानून सफाया गरिएको छ जसमा नयाँ आपराधिक कोड, को ग्रहण पछि हटाइएको छ।
माथि उल्लेख रूप मा, सेचिलिस र नाउरू, मे 2016 मा homosexuals विरुद्ध यसको व्यवस्था निर्मूल साथै बेलीज रूपमा अगस्ट 2016. मा साथै, माथि उल्लेख रूपमा, चाड समलिङ्गीहरूले विरुद्ध व्यवस्था डिसेम्बर 2016 मा अपनाए।
इराक उहाँले समलिङ्गी सम्बन्ध विरुद्ध नागरिक नियमहरू छैन तापनि, सूचीमा थपिएको छ। तर, मा 2015 देश IGLA मार्फत इराक मा तथ्याङ्कले अनुसार समलिङ्गी सम्बन्ध लागि मृत्युदण्ड सुनाइसकेको जो कोर्ट, आयोजित।
चाड छोटो समयको लागि गलत कारणले प्रस्तावित नयाँ आपराधिक कोड, हुनेछ जेलमा 15 20 वर्ष समावेश जो र को व्यक्ति संग सेक्स मा लगे गर्नेहरूका लागि देखि 50 हजार 500 Francs "को राम्रो गर्न 2014 मा सूची थपिएको छ एउटै सेक्स। " IGLA प्रस्तावित परिवर्तनहरू चाड को अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित छैन गरिएका बुझे एक पटक मा सूचीबाट देश हटाइएको थियो।
इस्लामी राज्य सूचीमा आफ्नो सेना द्वारा बाहिर थिए जो उत्तरी इराक र उत्तरी सिरिया, को क्षेत्रहरु मा LGBT समुदाय को सदस्य को कार्यान्वयन डेटा को प्रकाशन पछि थप गरिएको छ।
IGLA एक इस्लामी खलीफा को साइट त्यहाँ समर्पित छ एक पृष्ठको व्यवस्था संग एक खण्ड छ कि दाबी "गुदामैथुन लागि दण्ड।" यसलाई "गुदामैथुन लागि religiously मंजूर सजाय यसलाई बिना सहमति छ वा छैन कि, मृत्यु हो।" भनी उल्लेख
जहाँ त्यहाँ homosexuals विरुद्ध कानून हो
यहाँ 76 देशहरूमा र जो त्यहाँ समलिङ्गीहरूले विरुद्ध कानून हो स्वतन्त्र राजनीतिक संस्थाहरू एक सूची छ।
चाड यो नयाँ शक्ति दंड कोड 2016 मा प्रवेश गर्ने स्पष्ट हुँदा थपिनेछ
1 अफ्रीका। अल्जेरिया, अङ्गोला, बोट्सवाना, बुरुन्डी, क्यामरुन, कोमोरोस, मिश्र, Eritrea, इथोपिया, गाम्बिया, घाना, गिनी, केन्या, लाइबेरिया, लिबिया, मलावी (व्यवस्थाको पूरा निलम्बित छ), माउरिटानिया, Mauritius, मोरक्को, नामिबिया, नाइजेरिया, सेनेगल, सियरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, स्वाजील्याण्ड, तान्जानिया, टोगो, टुनिशिया, युगान्डा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे।
मध्य पूर्व सहित2एशिया,। अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, ब्रुनाई, एक इस्लामी राज्य, भारत, इरान, इराक, कुवेत, लेबनान, मलेसिया, माल्दिभ्स, म्यानमार, ओमान, पाकिस्तान, प्यालेस्टाइन / गाजा, कतार, साउदी अरब, सिंगापुर, श्रीलंका, सिरिया, तुर्कमेनिस्तान , संयुक्त अरब एमिरेट्स, उज्बेकिस्तान, येमेन।
3. उत्तर र दक्षिण अमेरिका। एन्टिगुवा र बरबुडा, बार्बाडोस, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गुयाना, जमाइका, सेन्ट किट्स र नेभिस, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडिन्स, त्रिनिदाद र टोबागो।
4 ओशिनिया। कुक टापुहरू, इन्डोनेशिया (Aceh र दक्षिण सुमात्रा), किरिबाती, पपुवा न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन आइल्यान्ड, टोंगा, तुभालु।
संयुक्त राज्य अमेरिका मा homosexuals विरुद्ध कानून 2003 मा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक हुन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहिचान गरिएको छ, तर तिनीहरूले 13 राज्य अमेरिका मा शक्ति अझै पनि हो: अलबामा, फ्लोरिडा, इढहो, कन्सास, लुइसियाना, मिशिगन, मिसिसिपी, उत्तर कैरोलिना, ओक्लाहोमा, दक्षिण कैरोलिना, टेक्सास, यूटा र भर्जिनिया। रूढिवादी राज्य सांसदहरु यी नियमहरू रद्द गर्न इन्कार, र केही अवस्थामा प्रहरीले अझै पनि लागू गरिएका छन्। यी नियमहरू उल्लङ्घन लागि गत केही वर्ष थप LGBT समुदाय को एक दर्जन सदस्य भन्दा detained गरिएका छन्, तर पक्राउ त्यसपछि स्वतन्त्र।
युरोप मा कुनै देश समलिङ्गीहरूले विरुद्ध कुनै नियम छ। यस्तो व्यवस्था संग युरोप अन्तिम स्थानमा उत्तरी साइप्रस (जो केवल टर्की देश मान्यता छ) थियो, तर तिनीहरूले जनवरी 2014 मा निर्मूल थिए।
युरोप मा प्रचार को निषेध
साथै, यो ती देशहरूमा समलिङ्गीहरूले पदोन्नति निषेध गर्ने उल्लेख लायक छ:
2013 मा प्रचार विरुद्ध व्यवस्था अपनाए छ जो रूस,। यो नाबालिग, इन्टरनेट सहित को उपस्थिति मा समलिङ्गीहरूले कुनै पनि सकारात्मक सन्दर्भहरू निषेधित।
यस्तै व्यवस्था छ जो लिथुआनिया। 2015 मा, यो छलफल भएको थियो, तर हालसम्म थप कानून सार्वजनिक गर्ने ती मा जरिवाना आयातित हुनेछ जो, अपनाए गरिएको छैन "परम्परागत परिवार मान चुनौती।"
युक्रेन, जहाँ यस्तो व्यवस्था 2012 र 2013 मा छलफल, तर यो अपनाए थिएन।
पहिलो अपनाए र त्यसपछि थियो जो माल्डोवा, 2013 मा व्यवस्था रद्द गरियो।
जहाँ यो व्यवस्था को ग्रहण 2016 को सुरुमा छलफल भएको थियो बेलारुस।
एशिया र अफ्रिकामा प्रचार विरुद्ध कानून
साथै, किर्गिस्तान (मध्य एशिया मा एक देश) अक्टोबर 2014 मा समलिङ्गी सम्बन्ध प्रचार विरुद्ध पर्याप्त कठोर कानून लिएर को कगार मा थियो। यो बिल पारित गरिएको छ भने, समलिङ्गी सम्बन्ध, र नाबालिग को उपस्थिति मा मात्र होइन भाषण (रूस जस्तै) बारे सकारात्मक जानकारी कुनै पनि dissemination, जरिवाना र कैद द्वारा punishable एक अपराध रूपमा मान्यता छ।
काजाकिस्तान मा, संसद को घर "आफ्नो स्वास्थ्य र विकास गर्न हानिकारक जानकारी बाल को सुरक्षा मा" बिल अपनाए, तर संवैधानिक परिषद को शब्द पनि अस्पष्ट थियो बताउँदै, मे 2015 मा अस्वीकार गर्नुभयो।
माथि उल्लेख रूपमा, लिबिया र नाइजेरिया पनि समलिङ्गी सम्बन्ध निषेध ती बाहेक समलिङ्गी प्रचार विरुद्ध कानून, छ।
अपराध को उद्देश्य पक्ष
टिप्पणी संग रूसी संघ को आपराधिक कोड को लेख 143
चोरी: अपराधी कोड नम्बर 158. को एउटा लेख अर्को रहस्य चोरी सम्पत्ति हो
Causation: अवधारणा, सुविधा र मूल्य
कला। आपराधिक प्रक्रिया को 164 कोड। "सामान्य अनुसन्धानहरूले को आचरण लागि नियम।" टिप्पणीहरू
मोन्टेनेग्रो, Herceg नोभी। मोन्टेनेग्रो - छुट्टी। Herceg नोभी
Moscati Giuseppe, पवित्र रोमन क्याथोलिक चर्च: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
कति केटी वजन गर्नुपर्छ
आकार र मानक मंत्रिमंडलों कूप को गहिराई